ကြော်ငြာစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ရောင်ပြန်ပါသော Self Adhesive ဗီနိုင်းများ လီမာ
ရောင်ပြန်ပစ္စည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်အမြဲလိုလိုပြသနေသည့်ကားလိုင်စင်ပန်းကန်ပြားလျှောက်လွှာ၊ လမ်း၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အထီးကျန်အတားအဆီးများနှင့်အချို့သောအသွားအလာရောင်ပြန်ဆိုင်းဘုတ်များ။
ကြော်ငြာဘေလ်ဘုတ်၊ နံရံကပ်ကြော်ငြာ၊ မီးခံသေတ္တာ၊ ဘတ်စ်ကားခိုလှုံရာ၊ စျေးကွက်ကြော်ငြာ၊ လမ်းကြော်ငြာ၊ ယာဉ်အမှတ်အသားရိုက်နှိပ်ထားသောတိပ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်းဘုတ်များ၊ လုံခြုံမှုစည်၊ ယာယီလမ်းအမှတ်အသားများ၊ စက်မှုလုံခြုံရေးလက္ခဏာများစသည်
1. တည်ငြိမ် inkjet စုပ်ယူမှု
2. High Brightness၊ ရောင်ပြန်ပြင်းအား 100cd/lx/m2 အထိ
အရောင် ၄ မျိုးရနိုင်သည်
၅။ prism စတိုင်ဖြင့်ဖြီးပါ
အရွယ်အစားများ A S M L XL
အကျယ် 1.35M 1.55M 1.8M 2.7M 3.15M
ရောင်ပြန်ပစ္စည်းကိုရောင်ပြန်အ ၀ တ်နှင့်ရောင်ပြန်အခင်းအဖြစ်ခွဲခြားသည်။ လျှောက်လွှာသည်လမ်းလုံခြုံရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်
လုံခြုံရေး။ ရောင်ပြန်အက္ခရာဆိုင်းဘုတ်များသည်အ ၀ င်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်လိုင်စင်ပန်းကန်ကိုရည်စူးထားသောရောင်ပြန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖန်ပုတီးများနှင့် PVC၊ PET, Acrylic, PC စသည့်အချို့သောပေါ်လီမာပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရောင်ပြန်လွှာတစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
တောက်ပမှုမြင့်မားသောကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြုလုပ်ထားသော glass microbead တိပ်ကိုပညာရှင်နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ မြင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားသောလုံခြုံရေးတိပ်သည်အမှောင်ထဲတွင်အလင်းကိုပိုမိုထင်ဟပ်စေသည်။ glass microbead ပုံစံ၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းသည်အလင်းပြန်သောအခါအလင်းရောင်တောက်ပစေသည်။ မြင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ပါ၊ သူမှန်သည်ကိုယုံကြည်ပါ၊ လုံခြုံမှုကိုတိုးတက်စေပါ၊ အန္တရာယ်များသည်နေရာတိုင်းတွင်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ BRIGHT PLUS LIGHT & SAFETY ကိုသုံးခြင်းဖြင့်မတော်တဆမှုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပါ။
စက်မှုကော်၊ လိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ မင်းရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့ဒီရောင်ပြန်တိပ်ကိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနဲ့ငါတို့လုပ်ထားတယ်။ အပူနှင့်စိုထိုင်းဆတို့ပါဝင်သည်။ PVC တိပ်တွင်အခဲနှင့်အစုတ်၊ ခိုင်မာသောစေးကပ်မှုတို့ကိုတွန်းလှန်ရန်ခိုင်ခံ့သောခိုင်ခံ့မှုရှိသည်။ စေးကပ်မှုကအသက်ကိုတောင်ရှည်စေနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်ပြန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနိမိတ်တိပ်သည်အကြမ်းခံပြီးတာရှည်ခံ။ ကောင်းမွန်သောမိုးလုံလေလုံ (သို့) ပြင်ပသုံးပစ္စည်းများအတွက်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးဘေးကင်းသောလူသားခရီးသွားလာရေးအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်သည်။
BRIGHT PLUS LIGHT & SAFETY စက်မှုလုံခြုံစိတ်ချရမှုရောင်ပြန်တိပ်လျှောက်လွှာသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်၊ ကားပါကင်၊ ဂိုဒေါင်များ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ရုံးခန်း၊ ရုံးခန်း၊ ဆေးရုံ၊ ကားဂိုဒေါင်၊ လမ်းများ၊ စက်ရုံများ၊ စက်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကားဂိုဒေါင်စသည့် application အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ တံခါးများ၊ ထရပ်ကားများ၊ လှေများ၊ စာတိုက်ပုံးများ၊ ခမောက်များ၊ နောက်တွဲယာဉ်အမျိုးအစားများ၊ ထရပ်ကားများ၊ စာတိုက်ပုံး၊ စက်ဘီး၊ ကား၊ rv၊ ကျောပိုးအိတ်၊ လက်ရန်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တိပ်သည်အဆုံးမရှိဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
ထုတ်ကုန်ကိုကာကွယ်ရန် PE ရုပ်ရှင်အိတ်နှင့်အတွင်းပိုင်းထုပ်ပိုးခြင်း၊ တင်ပို့မှုစံအတိုင်း hard carton ဖြင့်ထုပ်ပိုးခြင်း
ယခင်: Billboards များအတွက်ပုံနှိပ်နိုင်သော PVC ရောင်ပြန်ရုပ်ရှင်
နောက်တစ်ခု: Translucent Film Light Box ဖြစ်သည်